DRUM – Sawbwa Coffee
Classic Blend: မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ specialty ကော်ဖီ ကို ရာနှုန်းပြည့် အသုံးပြုထားပြီး ချောကလက် ၏ ခါးသက်မှု နဲ့ ချိုတဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
Brewing Method: espresso machine, filter, and cafetiere. To be enjoyed with or without milk.
ARTISAN SELECTIONArtisan blendမြန်မာပြည်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကော်ဖီစေ့များထဲက နှစ်စဉ် ကျတော်တို့ တမျိူးခြင်း စမ်းသပ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော ကော်ဖီစေ့များကို သာ အသုံးပြု ထားသော ကော်ဖီ selection ဖြစ်ပါတယ်။ Sawbwa's Gold Range ထဲက ကော်ဖီ‌တွေ ကဲ့သိုသော မွှေးကြိုင် တဲ့ အနံ့အရသာ ကို ကော်ဖီ တခွက်တိုင်းမှာ ခံစားရမှာပါ။Roast LevelLight-MediumBrewing MethodEspresso machine, French Press, stove-top. To be enjoyed with...